Ukuphupha ngomatshini Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umsebenzi womatshini ubandakanya ukuhlanganisa okanye ukuhlahlela oomatshini kunye nezixhobo zobuchwephesha, kunye nezinto zomntu ngamnye. Ukwajongana nokulungiswa kunye nokugcinwa kwazo kunye nokutshekishwa, ngakumbi rhoqo, ukuba zisebenza ngokufanelekileyo.
Oomatshini banokufumaneka kwiindawo ezininzi. Umzekelo, usebenza kwezobugcisa nakwimizi-mveliso. Kodwa banokufumaneka kwiinqanawa okanye kwiirig zokomba zeoyile.
Kuba imimandla yokusetyenziswa koomatshini inokuhluka kakhulu, uqeqesho lwahlulwe lwangumsebenzi okhethekileyo. Oku kubandakanya umatshini ochanekileyo, umatshini wezixhobo, umatshini weemoto, okanye umatshini wokusika, ukukhankanya nje imizekelo embalwa.
1 Isimboli yephupha "yoMatshini" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwe «oomatshini» iphupha - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwe «oomatshini» iphupha - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "yoMatshini" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubonwa ngoomatshini njengomfanekiso wephupha ikakhulu luphawu lwe Utshintsho. Ukuphupha kuya kujongana notshintsho, mhlawumbi kunye nentshukumo, kwi el mundo yomlindo. Nabani na ophupha ngokubona umatshini kwivenkile yakhe angalindela ishishini elifanelekileyo.
Ukuba uthatha imoto yakho uyisa kumnini wegaraji ephupheni ukuze uyilungise, kungekudala uza kuba ngumntu kwihlabathi elivukayo. isigqibo Ndifanele ukuthobela. Ukuba umatshini ophuphayo ulungisa injini yesithuthi, umphuphi kungekudala uza kuya kwimisebenzi yakhe egcwele amandla. Ukubona ioyile isasazeka kumakhenikhi kudla ngokubonisa inkxalabo ngezinto ezincinci.
Nabani na obona umfaki osebenza kumatshini wokulala angalindela ukunyusa umvuzo okanye enye kungekudala. ku khuthazwa ndijonge phambili. Ukusekwa kwendlela yokwenza iwotshi njengomatshini wephupha kungabonisa ukuba umphuphi ufuna ukunika ubomi bakhe ingqesho entsha yobomi. Kwakhona, ukulungisa iwotshi, mhlawumbi iwotshi ye-pendulum, kunokubonisa ukuba kufuneka kwenziwe uhlengahlengiso ebomini bakho.
Ukuba umatshini wokuchaneka usebenzisa iparafip ephupheni, ngokubanzi umntu kufuneka aqonde ukuba iinkcukacha zento zifuna ingqwalaselo.
Uphawu lwe «oomatshini» iphupha - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, umatshini okanye iplamba iyazala ephupheni. umxholo wengqondo, njengeemvakalelo, ithemba kunye nesimo sengqondo. Oku kunika ubomi bephupha ngakwicala lomntu ngamnye.
Ukuba i-screwdriver isebenza kakuhle ngelixa ulele, oku kunokubonwa njengophawu lwe ibhalansi yangaphakathi ukuba iqondwe. Nangona kunjalo, ukuba wena, njengomthengi ephupheni, awonelisekanga ngumsebenzi, kuya kufuneka ujongane ngokusondeleyo neemvakalelo zakho. Kungenxa yokuba kunzima ukubalawula.
Isixhobo kunye nomsebenzi owenziwa ngumatshini okanye owenzayo ephupheni unokubonelela ngolwazi oluthe kratya kutoliko lwengqondo lomqondiso wephupha.
Iscrewdriver esingumzekelo esingasasebenziyo sinokuqondwa kule meko njengesicelo sokwenza iinkqubo ezithile zangaphakathi. Ukuba umfaki unamathela okanye uqhuba into ephupheni, kufuneka unakekele endala Ukuziphatha dibana ne. Mhlawumbi kudala uzigcina.
Uphawu lwe «oomatshini» iphupha - ukutolika kokomoya
Ibonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu "lomatshini" wephupha linokusetyenziselwa ukubonakalisa Ukuzisola lowaphuphi ukuze aqondwe. Ufuna ukulungisa iminyhadala eyadlulayo kwihlabathi eliphaphamileyo.